TOROHEVITRA 10 AMBONY HANAFAINGANANA NY BROWSER CHROME HATRAMIN'NY AVO 5 HENY HAINGANA - 2021 - WINDOWS 10
Torohevitra 10 ambony hanafainganana ny Browser Chrome hatramin'ny avo 5 heny haingana - 2021
Niady tamin'ny google Chrome fampisehoana miadana aorian'ny fanavaozana ny windows 10? Mahatsiaro ho miadana kokoa noho ny teo aloha ve ny Google Chrome anao? Sa hitanao fa ny browser Chrome dia mandany CPU be na be RAM an'ny rafitrao ary mampiadana kokoa noho ny tokony ho izy ny solosainao? Mitady fomba ataovy haingana kokoa ny Google Chrome indray, ary mba hampihenana ny habetsaky ny RAM, CPU dia mihinana ilay browser. Eto ny tetika azo ampiasaina manafaingana ny browser chrome haingana hatramin'ny 5 heny.
Hevitra ato Anatiny FAMPISEHOANA 1 Ahoana ny fomba hanamorana ny Google Chrome haingana amin'ny windows 10 1.1 Vaovao farany Chrome Browser 1.2 Esory ireo fanitarana tsy ilaina 1.3 Alefaso mialoha 1.4 Hamarino tsara fa azo alefa ny serivisy faminaniana 1.5 Akatona haingana kokoa ny kiheba amin'ny fampiasana endri-panandramana 1.6 Ampitomboy ny RAM ho an'ny Chrome amin'ny fampiasana endri-panandramana 1.7 Mametraha Data Extraver saver 1.8 Mihazakazaha Chrome Browser miaraka amina Theme Default 1.9 Hamafa ny angona cache 1.10 Mihazakazaha fitaovana fanadiovana Chrome 1.11 Miverina amin'ny Fikirana amin'ny Browser misy anao
Ahoana ny fomba hanamorana ny Google Chrome haingana amin'ny windows 10
Google chrome no mpizaha tranonkala haingana sy be mpampiasa eran'izao tontolo izao Noho ny hafainganam-pandehany, ny tsy fitovizany ary ny fifandraisana maivana ho an'ny mpampiasa. Saingy aorian'ny fampiasana herinandro vitsivitsy dia mandany segondra vitsy ny browser ary hihena ny hafainganam-pandeha ankapobeny. Misy antony marobe (toy ny cache, junk, ny tantaran'ny Browser, ny fanitarana izay miteraka olana sns) izay mahatonga ny Google Chrome ho somary miadana kokoa. Eto ny fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny Google Chrome sy hahatonga ny google chrome hihazakazaka haingana kokoa amin'ny windows 10.
Vaovao farany Chrome Browser
Ity no zavatra voalohany tokony hataonao, hanatsara sy manafaingana ny browser chrome fampisehoana. Amin'ny ankapobeny, Google Chrome dia manavao azy ho azy amin'ny kinova farany. Saingy indraindray noho ny antony ara-teknika vitsivitsy sy ny fifandraisana tsy dia tsara, dia tsy afaka nanavao ny tenany izy io. Hanamarina sy hanavaozana ny karazana chrome browser chrome: // fanampiana ao amin'ny bara adiresy ary araho ny bitsika.
Esory ireo fanitarana tsy ilaina
Ity no zavatra faharoa tsy maintsy jerenao. Raha nametraka fanitarana chrome maromaro ianao dia mety hampihena ny tranokalanao izany na handany loharanon-karena tsy ilaina. Mba hijerena sy hanesorana ireo karazana fanitarana tsy ilaina chrome: // extensions ao amin'ny bara adiresy ary alefaso ireo fanitarana tsy ilaina. Na hanafoanana ny fanitarana na kitiho ny esory mba hamafana azy.
radeon setting: nijanona ny asany ny rindranasa mpampiantrano
Zava-dehibe tokoa ny famelana ireo faminaniana momba ny hetsika amin'ny tambajotra antsoina hoe prefetch izay mahatonga ny pejy web Google Chrome hanokatra haingana kokoa raha oharina amin'ireo mpizaha hafa.
alefaso ny fanavaozana mandeha ho azy ny Windows 10 an-trano
Raha te hanamarina sy ahafahana mamorona prefetch google chrome dia mankanesa eo an-tampon'ny zoro ankavanana ary tsindrio ny sary famantarana 3 teboka Hamburger dia mankanesa any amin'ny toerana misy anao. na Type chrome: // setting / ao amin'ny bara adiresy hanokatra toe-javatra. Mandehana mankany amin'ny farany ambany amin'ny pejy ary tsindrio ny Safidio safidy fandrindrana mandroso. Manaraka, amin'ny safidinao manokana dia zahao izay efajoro eo akaikin'ny ' Mampiasà serivisy faminaniana hametrahana pejy haingana kokoa . ” Alefaso indray izao ny browser Google Chrome anao izao mba hahazoanao mpizaha tranonkala haingana.
Hamarino tsara fa azo alefa ny serivisy faminaniana
Google Chrome dia mampiasa Internet isan-karazany tolotra SY serivisy faminaniana hanatsarana ny zavatra niainanao. Ireo dia miainga amin'ny fanolorana tranonkala iray hafa raha toa ka tsy tratra ilay tadiavinao jerena mialoha hetsika mialoha ny tambajotra mba hanafainganana ny fotoana fandefasana pejy.
Avy amin'ny Google Chrome indray> Fikirana> Asehoy ny fikirana mandroso. Misafidy ny Mampiasà serivisy faminaniana hametrahana pejy haingana kokoa fametrahana.
alt tab dia tsy mandeha amin'ny windows 10
Akatona haingana kokoa ny kiheba amin'ny fampiasana endri-panandramana
Raha te hiditra amin'ity toerana miafina ity dia mitendre chrome: // saina ao amin'ny bara adiresinao, mitady ny “ Fanakatonana haingana / varavarankely ”Ary tsindrio ny bokotra' Enable 'etsy ambany raha te hampandeha ity fampiasa ity.
Ampitomboy ny RAM ho an'ny Chrome amin'ny fampiasana endri-panandramana
Tsy maintsy ampitomboinao ny RAM izay avela hampiasa an'i Chrome. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny sandany dia azonao atao ny manitsy ny haavon'ny tile sy ny sakany hanokana RAM bebe kokoa ho azy. Hanolotra scrolling tsara kokoa sy fijanonana kely kokoa amin'ny fampiasana ny browser io.
Mba hanitsiana ny toe-javatra dia kitiho ny 'Default tile' ao amin'ny hitady fifampiresahana ary samy, Ny sakany sy ny haavony vita amin'ny tile safidy tokony hiseho eo amin'ny efijery amin'ny solo-sainao. Ampiasao ny menus drop-down hanovana ny sanda avy amin'ny 'Default' ho 512 .
Tsy niasa intsony ny fitendry windows 10
Mametraha Data Extraver saver
Raha mifandraika bebe kokoa amin'ny fifandraisana Internet mahantra ny olanao noho ny amin'ny mpitety lozabe, dia fomba iray ahafahanao manampy amin'ny fanatsarana ny fantsom-pifandraisana ny fametrahana ny extension Google Data Saver. Ity fanitarana ity dia mampiasa ny mpizara Google hanery sy hanatsara ny pejin-tranonkala alohan'ny hanaterana azy ireo amin'ny tranokalanao.
Mihazakazaha Chrome Browser miaraka amina Theme Default
Raha nanamboatra chrome google ianao dia amporisihinay hamerina azy io ho default, Satria mihinana RAM ny lohahevitra, ka raha mila ny navigateur azo atao haingana ianao dia mihazakazaha miaraka amin'ny lohahevitra misy anao. Mba hamerenana amin'ny laoniny ny karazana lohahevitra Chrome chrome: // fikirana amin'ny bara adiresy sy eo ambany Bika Aman 'endrika , raha ny Avereno amin'ny lohahevitra misy anao bokotra tsy greyed avy eo ianao mihazakazaka lohahevitra manokana. Kitiho ny bokotra raha hiverenana amin'ny toerana misy anao.
Hamafa ny angona cache
Olana lehibe iray hafa koa io izay miteraka toerana ambany amin'ny kapila mafy ary manadio azy ireo tsy tapaka fa mety hahita Google Chrome faingana ianao.
Karazana chrome: // setting / clearBrowserData ao amin'ny bara adiresy ary atoro anao ny fisafidianana ny Sary sy fisie cache safidy. Raha tsy izany, azonao atao ny mamoaka ny zava-drehetra ary manomboka amin'ny takelaka madio. Ary Ho an'ny valiny tsara indrindra vokatra mazava hatrany am-piandohan'ny fotoana .
Mihazakazaha fitaovana fanadiovana Chrome
Afaka mampiasa ny mpampiasa Windows Fitaovana fanesorana ny lozisialy Google . Ity dia fitaovana fanangom-bokatra chrome inbuild tsara indrindra izay manampy amin'ny fitadiavana rindrambaiko manimba amin'ny solosainao ary esorina izany.
Miverina amin'ny Fikirana amin'ny Browser misy anao
Raha toa ka tsy mahavita manafaingana ny Chrome Browser ny fomba rehetra etsy ambony dia tonga ny fotoana hiverenany amin'ny toe-javatra Browser misy anao. izay mamerina ny fikirakirana Chrome chrome ho fanamboarana toerana misy anao ary amboary raha misy fanamboarana fanaingoana nahatonga ny fitetezana Chrome hampiadana.
Mandrosoa Chrome, avy eo mandehana amin'ny menio More eo ankavanan'ny ambony izay toa teboka marindrano telo. Aorian'ny fipihana azy dia safidio ny Settings, avy eo Advanced. Ao, ho hitanao ny fizarana famerenana miaraka amin'ny bokotra mitovy anarana. Tsindrio izany raha hanamarina ny fiverenanao any amin'ny toerana misy anao.
takelaka fikandrana manga 10 windows_fault_in_nonpaged_area
Ireto misy fomba mahomby indrindra ataovy haingana kokoa ny google chrome amin'ny Windows 10, 8.1 ary 7. Moa ve ireo toro-hevitra ireo nanampy tamin'ny fanatsarana ny traikefanao tamin'ny tranokalanao? ampahafantaro anay ireo hevitra etsy ambany.
Amboary ny fampiasana CPU chrome avo lenta an'ny Google amin'ny windows 10 / 8.1 / 7
Err_Connection_Timed_Out Error olana ao amin'ny Google Chrome
Voavaha: Fahadisoana 'Tsy fifandraisana manokana' ao amin'ny Google Chrome
Ahoana ny fomba hanamboarana ny fampiasana disk 100% amin'ny Windows 10
Ny fomba fanamboarana chrome Google dia nijanona tsy miasa Windows 10, 8.1 ary 7
tsindrio havanana windows 10 miadana
tsy afaka mampitombo ny varavarankely amin'ny windows 10
fampiasana kapila installer windows modules
rafitra sy fanamafisana ny fampiasana kapila fitadidiana
Windows 10 fanavaozana nanapotika ny mikrô
Windows 10 vaovao farany windows taloha